SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
HARRIET paakafa muna 2006, akanga ava nemakore anenge 175. Harriet akanga asiri munhu. Yaiva kamba yaigara munzvimbo inochengetwa mhuka kuAustralia. Yakararama kwemakore akawanda kana tichienzanisa neatinorarama. Asi kana tichienzanisa makore ayakararama nemakore ezvimwe zvinhu zvakasikwa, makore ekamba iyi haamboshamisi. Funga nezvemienzaniso inotevera.
Kunyika yeFinland, vanoongorora vanoti kune kapuka kemumvura kanonzi rwamba (pearl mussel) kanogona kurarama kwemakore 200.
Kapuka kemugungwa kanonzi burrowing clam kanowanzorarama makore anopfuura 100 uye zvakatombonzi kune kamwe kakararama makore anopfuura 400.
Miti yakadai sebristlecone pine, sequoia, nedzimwe mhando dzemicypress nemispruce dzinorarama kwezviuru zvemakore.
Asi vanhu avo vakasikwa nemufananidzo waMwari vanongorarama kwemakore 80 kana kuti 90 chete pasinei nokuedza kwavanoita kuti vararame kwemakore akati wandei!
Unofungei, makore 80 kana kuti 90 ndiwo chete atingararama here? Kana kuti pane tarisiro dzokuti tinogona kurarama kwemakore akati wandei kutodarika ipapo? Vanhu vakawanda vanofunga kuti sayenzi uye kufambira mberi kuri kuitika panyaya dzokurapa zvichaita kuti tirarame kwemakore akawanda.
Sayenzi Ingabatsira Here?
Ichokwadi kuti sayenzi iri kubatsira chaizvo panyaya dzokurapa. “Kunongova nevanhu vashoma [muUnited States] vanofa nemhaka yezvirwere zvinotapuriranwa kana kuti matambudziko anoitika panguva yokusununguka pamuviri,” rinodaro bhuku rinonzi Scientific American. “Nhamba yevana vanofa vasati vasvitsa makore matatu yakadzikira ne75 muzana kubvira muna 1960.” Asi sayenzi haina kukwanisa kuita kuti vanhu vararame kwemakore akawanda. “Pasinei nemakore akawanda atorwa pachiitwa tsvakurudzo, nyaya yokukwegura ichiri kutemesa vanhu musoro,” rinodaro bhuku rataurwa pamusoro apa. Asi, “mashoko ari kuwanikwa ndeokuti, kukwegura kunokonzerwa nekusashanda zvakanaka kwemagene ari mumuviri wedu.” Bhuku iri rinoenderera mberi richiti: “Kana kukwegura kuchikonzerwa nemagene, zviri pachena kuti rimwe zuva tichakwanisa kugadzirisa dambudziko iri.”
“Pasinei nemakore akawanda atorwa pachiitwa tsvakurudzo, nyaya yokukwegura ichiri kutemesa vanhu musoro”
Pakutsvakurudza kwavo zvinokonzera kukwegura uye zvirwere zvinokonzerwa nokukwegura, mamwe masayendisiti ari kudzidza nezveepigenetics. Chii chinonzi epigenetics?
Masero mapenyu ane mirayiridzo iyo inodiwa pakugadzira mamwe masero matsva. Mirayiridzo iyi inowanikwa muDNA. Mumakore achangopfuura masayendisiti anga ari kudzika-dzika nokuongorora zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika mumasero acho uye kuongorora kwacho kunonzi epigenome. Epigenetics kuongorora kuti chii chinokonzera kuti gene riite zvariri kuita.
Zvinhu zvinogadzira epigenome zvakasiyana neDNA. DNA yakada kuti fananei nemanera (ladder) akamonyoroka asi epigenome inzira yokuchengeta mashoko ane chokuita nokuchinja kwemakemikari inenge iri paDNA. Basa reepigenome nderei? Sezvinoitwa nemunhu anotungamirira kwaya kuimba, epigenome ndiyo inoronga mashandiro emirayiridzo iri muDNA. Maepigenome anoita kuti magene ashande kana kuti asashanda zvichibva pakuti sero riri kudei kana kuti muviri wemunhu uri kuwana zvokudya zvakaita sei, uye stress yomunhu yakamira sei kana kuti makemikari omuviri wake akamira sei. Ongororo dzinosanganisira epigenome dziri kuita kuti vezvesayenzi vachinje mafungiro avo pamanzwisisiro avanoita zvinokonzera zvimwe zvirwere kana kuti kuchembera.
“[Epigenetics] ine zvainoita pazvirwere zvakadai sezvinotadzisa pfungwa kushanda zvakanaka (schizophrenia) uye chirwere chemabhonzo (rheumatoid arthritis), uye chekenza,” anodaro Nessa Carey mumwe anoongorora nezveepigenetics. Uye “ine zvainoita pakuita kuti munhu akwegure.” Saka kuongorora nezveepigenetics kunogona kuita kuti pazivikanwe nzira dzinobatsira vanhu kuti vave noutano hwakanaka, vasarwara nezvirwere zvakadai sekenza uye kuti vararame kwenguva yakati rebei. Iye zvino hapana chine musoro chati chabuda patsvakurudzo idzi. Carey anoti “iye zvino chatinongoziva chingabatsira kuti munhu asakurumidza kukwegura kudya zvine utano nekuita maekisesaizi.”
Chii chinoita kuti vanhu vanetseke zvakanyanya kudai vachida kurarama nokusingaperi? Chinomboita kuti tide kurarama nokusingaperi chii? Pepanhau rokuBritain rinonzi The Times raiva nemubvunzo unoti: “Sei vanhu pasi rose vasingadi kufa, vachiti mweya haufi, vamwe vachiti munhu akafa achamutswa uye vamwe vachiti uchazorarama wava mumwe munhu kana kuti imwe mhuka?” Sezvatichaona, mhinduro yacho inoita kuti tione chikonzero chinoita kuti vanhu vakwegure.
Sei Tichida Kurarama Nokusingaperi?
Vanhu vakaedza kutsvaka mhinduro yemubvunzo iwoyo kwezviuru zvemakore. Pane tsanangudzo inogutsa here inoratidza kuti sei tichida kurarama nokusingaperi uye kuti sei miviri yedu ichigona kurarama nokusingaperi? Mamiriyoni evanhu anogona kupindura zvakajeka kuti hongu! Chikonzero nei? Vakawana mhinduro dzinogutsa dziri muBhaibheri dzine chokuita nokusikwa kwevanhu.
Kubvira pakutanga chaipo, Bhaibheri rinotaura kuti kunyange zvazvo vanhu vaine zvimwe zvinhu zvavakafanana nemhuka, pane zvimwe zvavakasiyana nadzo. Somuenzaniso, Genesisi 1:27 inoti Mwari akasika vanhu nemufananidzo wake. Pakuti kudii? Pakuti akavasika vachikwanisa kuratidza rudo, kururamisira, uye uchenjeri. Uye sezvo Mwari achirarama nokusingaperi, akaisa matiri chido chokurarama nokusingaperi. “Akaisa kurarama nokusingaperi mumwoyo nepfungwa dzevanhu,” inodaro Muparidzi 3:11.—The Amplified Bible.
Umboo hunoratidza kuti kubvira pakutanga takasikwa kuti tirarame kwemakore akawanda hunooneka pamashandiro anoita pfungwa, kunyanya pakukwanisa kwadzo kudzidza zvinhu. Bhuku rinonzi The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders rinotaura kuti pfungwa dzemunhu “hadzigumi” kudzidza. Kuva nepfungwa dzinoshanda zvakadai kunoratidza kuti munhu akasikwa achifanira kurarama nokusingaperi. Mashandisiro anoita vanhu pfungwa anonyatsoratidza kuti Mwari akasika vanhu kuti vararame nokusingaperi. Saka sei tichikwegura, tichitambura, uye tichifa?
Chikonzero Chinoita Kuti Tikwegure Uye Tife
Murume nomukadzi vokutanga vakasikwa vasingatadzi uye vaine rusununguko rwokusarudza zvavaida. Zvinosuwisa kuti vakatadza kushandisa zvakanaka rusununguko rwavo vachibva vapandukira Musiki wavo. * (Genesisi 2:16, 17; 3:6-11) Kusateerera kwavo kana kuti chivi chavakaita chakaita kuti vanzwe vaine mhosva uye vanyare zvikuru. Chakaitawo kuti miviri yavo iparare zvishoma nezvishoma kusvikira vafa. “Kuruma kunobereka rufu chivi,” inodaro 1 VaKorinde 15:56.
Sezvo munhu ane zvaanotodza pavanhu vomudzinza rake, vanhu vose vakabva nokuna Adhamu, vakaberekwa vaine chivi. VaRoma 5:12 inoti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.”
Kubva pane zvataona panyaya iyi toti kudii? Chikonzero chinoita kuti munhu ararame nokusingaperi hachisi kuzobva paongororo dzinoitwa nevesayenzi. Mwari chete ndiye anogona kubvisa matambudziko anokonzerwa nechivi. Asi achazviita here? Bhaibheri rinopindura zvakajeka kuti hongu!
“Achaparadza Rufu Nokusingaperi”
Mwari akatotora danho rakakura rokuti abvise chivi uye rufu. Akatuma Jesu Kristu kuti azotifira. Rufu rwaJesu rwunogona kutibatsira sei? Jesu akaberekwa asina chitadzo uye “haana kuita chivi.” (1 Petro 2:22) Nemhaka yechikonzero ichi aigona kurarama nokusingaperi, asina chivi pasi pano. Zvii zvaakaita neupenyu hwake? Akaupa kuti atinunure pazvivi zvedu. Jesu akapa upenyu hwake “kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.” (Mateu 20:28) Munguva pfupi iri kutevera tichanyatsobatsirwa zvizere nerudzikinuro rwake. Runokubatsira sei? Ona magwaro aya:
“Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”—Johani 3:16.
“Chokwadi achaparadza rufu nokusingaperi, uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvose.”—Isaya 25:8.
“Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.”—1 VaKorinde 15:26.
“Tende raMwari riri pakati pevanhu . . . Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo.”—Zvakazarurwa 21:3, 4.
Unogona kurarama kwemakore akawanda sei? Mhinduro yeBhaibheri yakajeka: Vanhu vanogona kuva netariro yokurarama nokusingaperi uye tariro iyoyo ichazadziswa apo Mwari achabvisa uipi hwose panyika. (Pisarema 37:28, 29) Jesu aitaura nezvetariro iyoyo paakaudza murume aiva akarovererwa pedyo naye kuti: “Uchava neni muParadhiso.”—Ruka 23:43.
Zvagara zviri matiri kuti munhu ave nechido chokurarama nokusingaperi uye hazvina kuipa kufunga saizvozvo. Ndiwo masikirwo atakaitwa naMwari! Uyezve achazadzisa chido chedu ichocho. (Pisarema 145:16) Asi tine zvatinofanira kuitawo. Chimwe chacho tinofanira kutenda muna Mwari. “Pasina kutenda hazvibviri [kunyatsofadza Mwari], nokuti iye anosvika kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa mubayiro vaya vanomutsvaka nomwoyo wose,” inodaro VaHebheru 11:6. Kutenda kwakadaro haisi nyaya yokuti unofanira kuzvitenda nokuti ndizvo zvawanzwa asi kuti une zvikonzero zvine musoro zvinobva muBhaibheri. (VaHebheru 11:1) Kana uchida kuva nekutenda kwakadaro, tapota taura neZvapupu zvaJehovha zviri pedyo nekwaunogara kana kuti enda paindaneti www.jw.org.
^ ndima 21 Kupanduka kwakaita Adhamu naEvha kwakamutsa nyaya hombe pamusoro paMwari. Nyaya dzinoratidza kuti sei Mwari achirega vanhu vachitambura, dzinotsanangurwa mubhuku rinoshandiswa pakudzidza Bhabheri rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? Riverenge paindaneti pawww.jw.org.
Iye Zvino Ungararama Kwemakore Akawanda Here Uye Uine Utano Hwakanaka?
Paongororo yakaitwa yaibatanidza vanhu vanopfuura 1 500 avo vakaberekwa mumakore okuma1910, masayendisiti anoona nezveutano Howard S. Friedman naLeslie R. Martin vakati zvinhu zvinoita kuti munhu ararame kwenguva yakareba kuita zvinhu nemazvo uye kuva nevanhu vakawanda vaunowirirana navo. “Vanhu vanoita zvinhu nemazvo vanoita zvose zvavanogona kuti vadzivirire utano hwavo uye havaiti zvinhu zvinogona kuvakuvadza,” anodaro Friedman naMartin. “Kazhinji havasvuti, havanwisi doro, havashandisi zvakanyanya madhiragi, uye havamhanyisi motokari. Kazhinji vanosunga mabhandi pavanenge vari mumotokari uye vanotevedzera zvavanenge vaudzwa nanachiremba. Havakwanisi havo kudzivisa zvinhu zvose zvine ngozi asi vanoedza kuongorora zvavangaita kuti vatambire kure nazvo.”
Panyaya yokushamwaridzana nevanhu, vanhu vakararama kwemakore akawanda ndevaya “vaiva neshamwari dzakawanda uye . . . vaibatsirawo vamwe.” Vanyori vanoti panyaya dzesayenzi, chirevo chinowanzotaurwa chokuti “Vanhu vanoita zvakanaka ndivo vanokurumidza kufa, uye vanoita zvakaipa ndivo vanonoka kufa,” hachishandi. “Kutaura chokwadi . . . vanhu vanoita zvakaipa ndivo vanokurumidza kufa, asi vanoita zvakanaka vanorarama kwemakore akawanda.”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ungararama Kwemakore Akawanda Sei?